Sawubona ... Ngaba kukho umntu apho? - Geofumadas
Sawubona ... Ngaba kukho umntu apho?
NgoNovemba, 2009 egeomates My
Ngaba uyayazi nayiphi na indlela yokwenza uxinzelelo olungqinelanayo, phantsi kweempawu zecandelo elincinci kunomlinganiselo ogqityiweyo owenziwe kwiimvini esengxatsheni sasekhohlo?
Nkumbulo na sibutyake CPU ngaphezulu kwe 70%, ucinga ukuba ndithanda izinto 15 ukwenza ezine ebusuku ezimbini lithemba ukuba aye kuba guys ukuhamba, umtshato awukwazi miss ... kunye uhlobo disenchantment malunga uhlobo nende kwi Ubeko screen-level.
... ukuba akuninzi kakhulu ukuyibuza.
Post edlulileyo«Edlulileyo gvSIG, eya kuba kwi-5tas. iintsuku
Post Next AutoCAD, indlela iFILEDIA eguqukileyo isebenza ngayoOkulandelayo "
Iimpendulo ze-7 "Sawubona ... Ngaba kukho umntu apho? "
Molo Yesu, inkcazo ayindikhathazi nakanye. Andiqondi ukuba spam kwaye ndiyazi ukuba aveli kuwe.
Inxalenye yerektri yewebhu, yingakho ndiyiyeka.
ummm malunga nokuphawula kwepajillero, ukusuka kwi-geomarketingspain asinayo okanye sikholwa ukuba asinayo ingxaki nge-geofumadas.
Le ngxelo kunye nolwazi aluveli kwiblogi, ndiyathemba ukuba ayikukhathazi ukusuka kwethu.
Thatha iipilisi ze-valerian iintsuku ezimbalwa ebusuku kwaye ulale ngokuzola uya kubona utshintsho kwiintsuku ezimbalwa
UJan Carlos Pineda uthi:
i-Yucatecan entle eneemalm ezintathu kwaye ulale usuku olupheleleyo ngokungathi ihlabathi alikho
Khangela, maxa wambi sinegalelo lokunyusa amanqanaba ethu oxinzelelo. Ndiyacetyiswa ukuba uphakamise imisebenzi yakho; kuba ngelishwa, NONKE ungeke ukwazi ukwenza. Yamkele le nyikekayo, mhlobo. Ngaphandle kokuba udibanise kwaye nangona kunjalo, awuyi kuba nguye owayeya kuzo zonke iziganeko ...
Into elandelayo kukuba ukhethe uhlobo lomsebenzi oza kuwusebenzisa ukuze uphumule, andazi ukuba yiyiphi oyithandayo ... kwaye MSEBENZELE ukunika ixesha kwi-ajenda yakho. Impilo yakho iya kubulela.
Angela kusuka kwi-Chocolate Bailable uthi:
hummm umhlobo waseCuba kudadewethu uhlala esithi kwezi meko "phumla kwaye usebenzisane" andazi kakuhle ukuba izonceda ... ukuba kungenjalo ... kungenzeka ukuba ikwenza uzive uhlaziyekile, igama lakhe nguMart'nália kwaye ndiyamzisa evela EBrazil ... http://www.youtube.com/watch?v=OdEDjHcVjfU ukubona ukuba kunceda!
Iibhande ezivela kumzantsi we-Iberia!